साप्ताहिक हेडलाइन्स : आज के– के छापियो ? - साप्ताहिक हेडलाइन्स - साप्ताहिक
हरेक शुक्रवार प्रकाशन हुने लोकप्रिय पत्रिका साप्ताहिकमा आज के–के छापियो ? धेरैका लागी कौतुहलता हुन सक्छ । युवापुस्ताको लोकप्रिय ‘साप्ताहिक’ घरसम्म आइपुगेको छैन भने, इन्टरनेटमार्फत साप्ताहिकमा के के छापियो, छोटो–छोटो जानकारी लिनुहोस् ।
साप्ताहिकको फ्रन्टपेजमा सुपरस्टार प्रदीप खड्का र अनमोल केसीको बिषयमा स्टोरी छ । ‘प्रदीप–अनमोल साइलेन्ट ब्याटल’ शिर्षक दिइएको यो स्टोरीमा दुई अभिनेताका सबल र दुर्बल पक्ष, उनिहरुको छोटकरी जानकारी र यि दुईप्रति उनिहरुले नजिकबाट काम गरेका केहि कलाकार तथा निर्देशकहरुको तर्क समाबेश गरिएको छ ।
डेरामा बस्दाको जिन्दगी कस्तो हुन्छ ? अधिकारी रवीन्द्रले समय सन्दर्भमा बिचार सम्प्रेषण गरेका छन् । त्यस्तैगरी, विदेशमा समस्या मात्र होइन, अवसर पनि छ शिर्षकमा छोटकरीमा देवेन्द्र विश्वकर्माले विचार राखेका छन् ।
अहिलेका चर्चित अभिनेता हुन्, विपीन कार्की । अरुबाट प्रभावित भइएला भन्ने डर लाग्छ शिर्षकमा जनक तिमिल्सिना र महे् तिमिल्सिनाले लिएको विशेष अन्तरवार्ता पनि रोचक छ । अन्तरवार्तामा उनले यो स्थानसम्म आउनका लागी गरेको संघर्ष र भावी योजनाहरु समेत समेटिएको छ ।
नेपाल टेलिकमको मोबाइल मनी, हालसम्मकै सबैभन्दा ठुलो हिट शिल्ड, फाइभजीको सफल परिक्षण, थ्रडी प्रिन्टेड मुटु, स्मार्टफोनबाट नियन्त्रण हुने भेइकल लगायतका विषयमा पनि जानकारी छ ।
पोखराबाट राजाराम पौडेलले नाटकमा अभिनय गर्ने रहर शिर्षकमा समाचार लेखेका छन् भने आजको केवल एक प्रश्नमा नेपालका चर्चित सेलिव्रेटीहरुलाई बेमौसमी वर्ष हुँदा तपाईलाई कस्तो लाग्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ ।
गायिका कला पंगेनीले तीजका गीत रेकर्ड गराउँदैछिन्, त्यस्तै गायिका सोना अमात्यको छोटो संगीत यात्रा, आलोकश्रीका रोजाईमा गीत, संगीत, शव्द र गायकहरुको बारेमा समेत जानकारी छ । यस्तैगरी, सबिनको प्रयास र संगीत क्षेत्रमा पछिल्लो समय उदाएका कान्छा ¥यापरको बारेमा पनि साप्ताहिकले संक्षेपमा समाचार बनाएको छ ।
चलचित्र यात्राबाट नेपाली चलचित्र उद्योगमा पाइला चालेकी अभिनेत्री मलिका महतका बारेमा सेक्रेट कुराहरु के के छन् ? उनलाई मन पर्ने खानेकुरा, उनको स्वभाव, रिलेशनसिप लगायतका बिषयमा सानो अन्तरवार्ता समेत पढ्न सकिन्छ ।
बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले हालै २ करोड ९० लाख रुपैयाँको लुक्समा देखिएपछि कति चर्चा भयो ? सलमान र क्याटरिना फेरी पनि सँगै देखिन लागेका छन्, विराट र सारा एकसाथ एउटा बिज्ञापनमा देखिन लागेका छन् भने अनन्या बलिउडमा ईन्ट्रि गर्न लागेको लगायतका खबर पनि यसपटकको साप्ताहिको बलिउड स्तम्भमा समाचार छ ।
विकेण्ड स्तम्भमा मटिया मेनु, पोखरामा डिस्को, मोटो ट्रयाक २, योगसँगै हाइक, गर्मीको फेसन रनवे, साउथ इन्डियन फुड, रेस्लिङको मज्जा लगायतका खुराक पनि छन् ।
अघिल्लो हप्ता सार्वजनिक भएको चलचित्र दाल भात तरकारी किन चलेन ? किन धेरैले मन पराएनन् ? छोटकरीमा टिप्पणी गरिएको छ । यस्तैगरी, आजदेखी चलचित्र पसिना सार्वजनिक भएको खवर पनि छ । यसै हप्ता डि सिने एवार्ड आयोजना गरियो, विभिन्न विधामा बाँडिएको एवार्ड को–कस्को हातमा पर्यो ? त्यो पनि पढ्न सकिनेछ ।
साप्ताहिकको ब्लोअपमा उकुषा गिरीको आकर्षक तस्विर हेर्न सकिनेछ । महेश प्रधानले खिचेका तस्विर निकै आकर्षक छन् । व्लोअपमा २ वटा तस्विर सार्वजनिक भएपनि साप्ताहिकमो अफिसियल साइटमा भने आधा दर्जनको हाराहारीमा तस्विर हेर्न सकिन्छ ।
अभिनेत्री बर्षा सिवाकोटीको डे«सअप चर्चा, निकिताको जोश, पल शाहले किस सिन नगर्ने, नाजिरलाई लेडिज फ्यानको गिफ्ट, रेखा थापाको आफ्नै मर्जी, अभिनेत्री सुहाना अमेरिका नजाने, फाइटर विराज, छोयो की बिहे लगायतका विषयमा नेपाली कलाकारहरुका बारेमा गसिप छापिएका छन् ।
मिस नेपाल नर्थ अमेरिका न्युयोकर्मा हुन लागेको खबर पनि प्रकाशन भएको छ । यस्तैगरी, दर्शकको मन जित्दै रेडियो अन ह्विल्स, आदिवासी जनजातिको फुड फेस्टिबल, अमेरिकाको चर्चित ब्राण्डडे स्टोरका लागी विमलेश, लिटिल मिस हेरिटेज लगायतका समाचार पनि छन् ।
पहिलो विश्वमा मुकुन्द बोगटीले समलिंगी पेन्गुइन बढे, जहाँ विवाहित महिलाले पाउँछन् श्रीमानकै साथ, धनाढ्य फेसन हो लगायतका पढ्न लायक स्टोरी खोजेका छन् ।
घुमघामका लागी घलेगाउँ लोकप्रिय छ । घलेगाउँ हरेक घर एउटै रंगमा शिर्षकमा आश गुरुङले स्टोरी लेखेका छन् । यस्तैगरी, हेमन्त मल्ले अपराध विश्लेषण गर्दै अपराधको बदलिंदो प्रवृत्ति शिर्षकमा विश्लेषण गरेका छन् ।
साप्ताहिकको फेसबुक फण्डा, पत्याउनु हुन्छ ? तथ्य र सत्य, परिकार, सुभ बिहानी, करिअर, फिटनेस, औषधिका रुपमा कोदो लगायतका स्तम्भमा पनि पढ्न लायक जानकारी छन् ।
जनताको बिचारमा पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका प्रभावशाली नेता माधव कुमार नेपाल घुमेको घुमै गर्दा कस्तो लाग्यो ? पाठकहरुले आफ्नो बिचार प्रदान गर्नुभएको छ ।
डा. राजेन्द्र भद्राले यौन जिज्ञासा र समाधानका विभिन्न उपायहरु पनि दिनुभएको छ । यस्तै, अनुको अपेक्षित संन्यास, तन्नेरी गोल मेसिन साम्बा, फेवाताल किनारामा घोड चढि, प्रधानमन्त्री कपमा पारसको डेब्यु, स्टेडियमको आकार भयो भाइरल, तरुनी श्रीमतीको सल्लाह, चर्चा जुमनुको बिषयक स्टोरी पनि छ भने कर्मा छिरिङ शेर्पाको परिवर्तनको नारासहित अखिल नेपाल फुटवल संघको नेतृत्व सम्हालेको १ बर्ष पुगेको खबर पनि छ । समाचारमा उनले आफुले गरेका कामहरुको नतिजा केहि समयपछि देखिने बताएका छन् । साथै, एन्फाले नाम मात्रैको लिग नगर्ने उनले बताएका छन् ।
साप्ताहिकको जाँदाजाँदै स्तम्भमा २० बर्षदेखी द कमान्डो हिरोको कम्ब्याक शिर्षकमा हङकङदेखि अनोज रोक्काले राजकुमार राइसँग अन्तरवार्ता गरेका छन्, यो पनि पढ्नका लागी रोचक छ ।
यस्तैगरी, घोराही–स्वर्गद्धारी केबुलकार र एकै परिवारका ६ जना दिदीबहिनी प्रहरीमा शिर्षकको समाचार पनि साप्ताहिकले प्रकाशन गरेको छ । यि समाचारहरु पुर्ण रुपमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने आजको साप्ताहिक पढ्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल अनलाईन खोल्दै गर्नुहोला ।
अब एन्ड्रोइड क्यू, यस्तो हुनेछ फिचर जेष्ठ १६, २०७६